Emela Ego Omenala PR | Martech Zone
Egbula Ego Omenala PR
Anyị na-eweta na ogbako mpaghara taa ma ana m ege ihe ngosi PR. Mmekọrịta ọhaneze nwere were akụ na ụba, mana ụlọ ọrụ PR nke mepụtara mmekọrịta siri ike na ndị isi mgbasa ozi na-aga nke ọma. Agencylọ ọrụ anyị esoro ụlọ ọrụ, Dittoe PR ihe, maka ihe karịrị otu afọ ugbu a ma anyị enweela nsonaazụ dị egwu.
Otu n'ime ndị ahịa anyị nwere saịtị ọhụrụ na ikike na ntanetị na ntanetị, mana ọ dị mkpa iji mepụta ọtụtụ ihe. Dittoe PR nwere ike ịlele akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ na webazines (ntanetị na-ebipụta ntanetị) wee nweta isiokwu na ọtụtụ n'ime ha n'ọnwa mbụ. The mkpuchi nyeere anyị aka inwe ọganihu ha search engine ogo na mụbaa visibiliti nke ha ika… n'ihi na elu click-site udu na ha na-akwụ ụgwọ search mgbasa ozi.
Mgbasa mgbasa ozi bụkwa ohere dị egwu. Jikọtara na njikarịcha ọchụchọ, Mgbakọ mgbasa ozi na-adịbeghị anya anyị kesara mba niile maka otu ụlọ ọrụ niche natara ihe karịrị 1000 echiche, ọnụọgụ 4% pịa, na ihe karịrị 30 backlinks siri ike na ngalaba ha. Uru dị ebe a abụghị ọnụ ọgụgụ dị elu… ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị elu nke nwere oke mkpa dị oke mkpa. E bipụtara ndị mgbasa akụkọ ozugbo na ndị ziri ezi. Nkwupụta mgbasa ozi ahụ mere ka ndị na-agụghachi azụ na akwụkwọ akụkọ na ebe ọdịda ebe ejidere data atụmanya. Anyị na-re-eji pịa ntọhapụ na ụlọ ọrụ blog… ya mere, ọ bụ oké ọdịnaya dị ka nke ọma.
Na ilele nloghachi nke itinye ego, ego ndị akwụgoro na PR ọdịnala enweela ezigbo mbido azụmaahịa azụmaahịa - na njirimara akara, na-enweta ndị na-eme ihe ike, na-aga ahịa na ụzọ na-apụtachaghị ìhè, ma na-emecha gbanwee.
Tags: prmmekọrịta ọhanezeomenala prọdịnala ọha na eze
Ibiaghachi ọnụego, oge na saịtị na Omume Ndepụta